ဘာသင်တန်းတွေ တတ်မလဲ- စာမျက်နှာ2— MYSTERY ZILLION
ကျနော့် အနေနဲ့ကတော့ ဒီ Cybersecurity သင်တန်း တစ်ခုခု တပ်ထားရင်၊ ဒီတစ်သက် အိုင်တီ လောကမှာလုပ်စားလို့ ရနေမှာပဲ။ တစ်နေ့တစ်နေ့ အင်တာနက်မှာ ပြသနာပေါင်း သောင်းခြောင်ထောင် တွေ့နေရတယ်။ အိုင်ဒီခိုးတယ်၊ ဟက်ကင်းလုပ်တယ်၊ အယောင်ဆောင်တယ်၊ စပိုင်၊စပန် bot တွေ လွှတ်တယ်၊ လိုင်စင်မယ့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်သီချင်းတွေ၊ ပရိုဂရမ်တွေရှိတယ်၊ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ရှိတယ်။
အဲဒါတွေ အားလုံးအတွက် လုံခြုံရေး နေရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကတော့ အင်တာနက် ရှိသရွေ့လိုနေဦးမှာပဲလေ။
သေချာချာ ဘာပညာရပ်တွေလဲ သိချင်ရင်တော့ ကိုတွတ်တီကိုမေးကြည့်ကြပါ။ :6:
ကျွန်မ a+ သင်တန်းတက်ချင်လို ့ပါ။ အဲ့ဒါ ဘယ်သင်တန်းမှာ တက်ရင် ကောင်းမလဲ လမ်းညွှန်ပေးပါလား
htoohtoo wrote: »
စာမေးပွဲဖြေဖို့ အတွက်ဆိုရင်တော့ စာတွေ့ သင်တန်းတွေကများပါတယ် တကယ် A+ ကို တတ်ချင၊်
ကိုကိုယ်တိုင် ပြင်တတ်ချင်ရင်တော့ ကျွန်တော့ အထင်နော် ဆားဗစ်စင်တာမှာ job training နဲ့ ၀င်တာပိုကောင်းပါတယ် ... အဲ့လို ဆားဗစ်စင်တာတွေမှာ A+ ကို (သူတို့သေသေချာချာသင်ပေးရင်ပေါ့) ပိုတတ်လွယ်ပါတယ် သင်တန်းမှာတော့ A+ ဆိုရင် ဒါက ဘာပစ္စည်း ဒါက ဘယ်လို အဲ့လောက်ပဲ သင်ပေးတတ်ပါတယ် .. တကယ်သင်ပေးတဲ့ သင်တန်းကျောင်းတွေကိုမဆိုလိုပါ ..နောက်ပီး practical A+ တွေက များသောအားဖြင့် သင်တန်းကာလ ၁လခွဲ ၂ လောက်ကအများဆုံးထင်ပါတယ် .. အဲ့အချိန်အတွင်းမှာ အသေးစိတ်တော့မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးထင်ပါရဲ့ .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သင်တန်းတက်တာလဲကောင်းပါတယ် :P
kotharthar wrote: »
ဆိုလိုတာက essence of programming က language specific မဟုတ်ပါဘူး။
language တစ်ခုကိုသုံးပြီး programming ရဲ့သဘာ၀ကို နားလည်ရင်၊ language
နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေဟာ အဘိဓာန် ကြည့်သလို၊ ရှာလို့ရတဲ့ စာအုပ်တွေအများကြီးပါ။
the success ofasoftware engineer is not about how much he know, but how fast
he can search the information he needs.
အဲဒီစာအုပ်တွေ အကြောင်းပြောပြပါလားဗျာ။ ကျွန်တော်က c++ လေ့လာနေပါတယ်..။
အခုတစ်လော singapore iss ကခေါနေ ပါတယ်။ အဲ့ဒါ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲ ဖြေ၇တယ် ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ ၀င်ခွင့် application form ဘယ်လိုတင်၇လဲ သိချင်ပါတယ်။ သိသူများ ရှိရင်ဖြေပေး ပါဦး။ မြန်လေကောင်းလေပါ။:D ပိတ်သွားမှာ ဆိုးလို့ပါ။ း
hninwai wrote: »
application form က OCT 15th deadline ပါ.
အခုလောလောဆယ် application form က update မဖြစ်သေးပါဘူး.
Programming ကတော့ အခြေခံအားဖြင့်..
ပြီးတော့.. သင်တန်းပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကွာသွားပါတယ်..
တချို့ သင်တန်းတွေက VB
အဲဒါ အခြေခံ အဆင့်တွေပေါ့..
Advance ပိုင်းမှာတော့ ကိုယ်ကြိုက်တာလိုက်ပဲ..
အဲဒါတွေက Windows Application ပါ..
နောက်မှ Web အကြောင်းပြောမယ်...
Java ကတော့ တခါရေးပြီးရင် Windows , Linux , Mac တို့မှာ run လို့ရပါတယ်...
သူကတော့ ကျွန်တော့်အမြင်အရ ပြောရင်...
GUI IDE မဟုတ်လို့ပဲလားမသိဘူး..
GUI IDE တစ်ခုဖြစ်တဲ့ JBuilder ကလည်း..
စက်ထဲမှာ သွင်းဖို့ဆို.. requirement ကလည်း တော်တော်မြင့်ပါတယ်..
Java က နောက်ပိုင်း ဟမ်းဖုန်းတွေ အတွက် ရေးလာပါပြီ..
Java ကတော့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်ခေါ်မယ်ထင်ပါတယ်..
VB.NET နဲ့ C# ကတော့..
.NET platform ပါ..
VB.NET က VB သမားတိုင်းရေးလို့ရတယ်..
C# ကလည်း C++ ဒါမှမဟုတ် Java သမားတိုင်းရေးလို့ရတယ်..
Component တွေ သုံးတာကတော့ သူတို့ နှစ်ခုလုံးက အတူတူပဲ..
VB.NET ကနေ C# ပဲဖြစ်ဖြစ်..
C# ကနေ VB.NET ပဲဖြစ်ဖြစ်..
သူကတော့ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်အကိုင် ကောင်းတယ်..
.NET စာမေးပွဲတွေဖြေထားရင် Company က အလုပ်ခန့်ဖို့ စဉ်းစားတတ်ပါတယ်..
အခုလိုရှင်းပြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... ကျွန်တော်က..software တွေကို.. ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ရေးတတ်ချင်ပါတယ်.. ပြီးတော့.. အခုသုံးနေတဲ့.. software တွေကိုလည်း.. ဖြေပြီးဖတ်ကြည့်ချင်ပါတယ်.. အဲဒါကျွန်တော်.. အရမ်းဖြစ်ချင်နေတဲ့ ဆန္ဒပါ..
ကျွန်တော်.. အခု ၁၀ လ ပိုင်းကို သင်တန်းတက်မှာပါ.. တက်ရင် ဘယ်သင်တန်းတက်ရမယ်ဆိုတာလေး.. ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..:101:
အခုပဲ စာအုပ်တစ်အုပ် (Ebook တစ်ခုခုကို) ပြီးအောင် ဖတ်ပြီး စမ်းသပ်လေ့လာလိုက်ပါတော့။
HTML, CSS, PHP နဲ့ C++ မြန်မာလို ebook လေးတွေဘယ်မှာရနိုင်မလဲ ပြောပြပါလား..
ကျွန်တော်က.. သင်တန်းမတက်နိုင်သေးလို့ပါ.. ကူညီပါနော်..ပြီးတော့.. online မှာ.. အခမဲ့သင်တန်းရှိ်လား.. ပြောပြပေးပါနော်..
blackjoker wrote: »
MZ edu ရှိတယ်လေ :):)
အင်္ဂလိပ်အပြောစွမ်းရည်တက်ဖို့ ကိုယ်တိုင်သုံးပြီး အသုံး၀င်ခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။
ရန်ကုန်မှာ လွယ်လွယ်၀ယ်လို့ရတဲ့ cambridge ielts စာအုပ်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်နောက်ဆုံးမှာ အကြားသင်ခန်းစာအတွက် စာသားတွေပါပါတယ်။ listeningအခွေကိုဖွင့်၊ စာအုပ်မှာ စာသားတွေရေးထားတဲ့ စာမျက်နှာကိုလှန်၊ ပြီးရင် သူတစ်ခွန်းပြောတာကို နားထောင်၊ ခဏရပ်ထား၊ စာသားကိုကြည့်ပြီး သူ့လေသံအနိမ့်အမြင့်အတိုင်းလိုက်ပြော၊ နောက်တစ်ခွန်း နားထောင်၊ ခဏရပ်၊ လိုက်ပြော၊ အဲလိုမျိုး တစ်ပုဒ်လုံးဆုံးအောင်ပြော၊ ဆုံးသွားရင် အစကနနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်၊ နောက်ဆုံး အခေါက်ကျရင် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း စာသားတွေကြည့်ပြီးပြော။ အဲလိုကျင့်ပေးသွားရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်အံ့သြယူရလောက်အောင် အပြောစွမ်းရည်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။
Kyaw Soe Linn
MZ က ဘော်ဘော် တို ့အတွက်ပါ။
ကျွန်တော် Myanmartraining က sponsor ရလို ့
စနေ နေ့(12.12.2009) က Creative မှာ Web Essential စတက်ရတယ်။
တကယ် ကောင်းတဲ့ သင်တန်းပါ။
သင်တန်းပုံစံက သင်ရိုးတင်မဟုတ်ပဲ Knowledge နဲ့ Thinking တွေပါ ပါ၀င်ပါတယ်။
ဒီနှစ်ရက်မှာတင် Internet သုံးရတာပိုတန်ဖိုးရှိလာပြီး
Internet အကြောင်းကို ပိုသိလာပါတယ်။
ပြီးတော့လည်း အရင်တုန်းက English စာကို တစ်ပိုဒ်ဖတ်ဖို့တောင်ပျင်းနေတာ
အခုတော့ဆရာပေးတဲ့ အိမ်စာတွေနဲ့တင် သူ ့အလိုလိုလေ့လာပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။
ကျွန်တော်တို ့က ဆရာပေးတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို Internet မှာရှာပြီးဖတ်လာရတယ်။
ဥပမာ စနေနေ့က Advantages & Disadvantages of Internet ဆိုတဲ့ခေါင်စဉ်ပေးလိုက်တယ်။
ီDisadvantages မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုရှောင်ရမယ်ဆိုတာပါပြောပြပေးပါတယ်။
Creative က ဆရာလိုမျိုး ဆရာတွေနဲ့ သင်တဲ့ ပုံစံတွေသာ
ဒါကြောင့် Web နဲ့ ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတက်ချင်တဲ့လူ (Web Designer ဖြစ်ဖြစ် Web Devloper ဖြစ်ဖြစ်)
မှတ်ချက်။ ။Sponsor ရလို့ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
English Speaking ကောင်းကောင်းပြောတတ်ချင်
ကျွန်တော် speakingကို ကောင်းကောင်းပြောတတ်ချင် ၊ အခုဟာက ကိုယ်ကတော့ နည်းနည်းပြောတတ်တယ် ၊ Foreignerက ပြန်ပြောတဲ့ စကားကျတော့ နားမလည်တော့ဘူး အဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ English Speaking သင်တန်းတွေကိုလည်း သွားမတတ်ချင်ဘူး ၊ ကျွန်တော့်မှာလည်း ကွန်ပျူတာက ရှိနေတော့ CDခွေ ၀ယ်ပြီးတော့ interactive video ခွေမျိုးလေးများရှိလားလို့ပါ။ ရှိရင်လည်း ညွှန်းပေးကြပါဦး၊ လေ့လာဖို့ ကောင်းမယ့်ခွေလေး၊ Speaking နဲ့ပက်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေ ၀ယ်ဖတ်ရင်ရော အဆင်ပြေနိုင်မလား၊ မဖြစ်ဘူး သင်တန်းတတ်မှရမယ် ဆိုရင်လည်း ပြောပေးကြပါဦး ဘယ်မှာကောင်းလည်း မန္တလေးမှာနော်၊ ရန်ကုန်မဟုတ်ဘူး။ သင်တန်းတတ်တာနဲ့ CD ခွေ ဘယ်ဟာ ပိုပြီးထိရောက်လည်းဆိုတာကို နားလည်အောင် ရှင်းပြပေးပါဦင်္း။
အကိုရေ.... တစ်ခုလောက် အကြံပေးပါရစေ..... Family Albums ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေး ဖတ်ကြည့်ပါလား.....သူက CD ရောပါတယ်.... CD ဖွင့်ပြီး... စာအုပ်ကလေးနဲ့ လိုက်လေ့လာရတာ တကယ်ကောင်းတယ် ဗျ.... ကျနော် လည်းသင်တန်းတွေ စုံနေပါပြီ ဒါပေမဲ့ တကယ်တက်လားဆိုတော့ သေချာမတက်ဘူး... အဲစာအုပ်ကလေးကို ဆရာ တစ်ယောက်ကလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာ ဗျာ တကယ်ကြိုက်သွားတယ်.....:)
C++ ကို ရန်ကုန်မှာ ဘယ်သင်တန်းကကောင်းလညး်.. ပြောပြပေးပါလား........???????????????????
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် စိတ်၀င်စား လို့ သွားတက်တာ..(နံမည်တော့ မပြောတော့ပါပူး) တစ်သိန်းကျော်ပေးရပီး.... ဘာမှ မတတ်လာပူးဆိုလို့ပါ.. ဆရာကိုယ်တိုင်လည်း မသင်ပူးတဲ့.. သင်တန်းပီး ပီးသား သူတွေ ပြန်သင်တာလို့ ပြောပါတယ်..
ကျွန်တော်လည်း တက်ချင်လို့ သင်တန်းကောင်းတာလေး သိရင် ပြောပေးကျပါအုံး.........
လူတွေဟာ second language တစ်ခုခုကို အမြဲတန်း သင်ယူချင်ကြပါတယ် ။ ဒီ language တွေဟာ ခရီးသွားတဲ့အခါမှာ အရမ်းကို အသုံး၀င်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဘယ် language ကို ရွေးချယ် သင်ယူရမလဲ ။ languages တိုင်းဟာ သူ့ဟာနှင့်သူ အသုံး၀င်ကြပါတယ် ။
ပြီးတော့ အလွယ်ဆုံးသင်ယူမှုက ဘာလဲ ။ လူတချို့ကသာ အချိန်ပေးပြီး သင်တန်းတက်ကာ language တွေကို သင်ယူနိုင်ကြသာပါ ။ ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ တိုးတက်မှုက မြန်ဆန်တယ်လို့ ခံစားရနိုင်ပါတယ် ။ ဘယ်သူကမှ weather မိုးလေ၀သနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို classroom ထဲမှာ ပြောဆိုချင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ နိုင်ငံခြားက မြို့တစ်မြို့ အကြောင်း Foreign City ၊ ဒါမှမဟုတ် Newspaper ကို မြန်နိုင်သမျ မြန်မြန် ဖတ်နိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့ကို လမ်းညွှန်မှုပေးသင့်ပါတယ် ။ ကမ္ဘာမှာ language တွေဟာ 7000 လောက်ရှိတော့ ဘယ်က စရမလဲဗျာ ။
Language experts တွေဟာ second language တစ်ခုကို သင်ယူဖို့ ရွေးချယ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံပေးထားတာတွေရှိပါတယ် ။ တခြား languages တစ်ခုခုဟာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဘာသာစကားနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိခြင်းဟာ အရေးကြီးပါတယ် တဲ့ ။ ကိုယ် သင်ယူမယ့် lannguage ဟာ grammar systems က လုံး၀ကို ကွဲပြားခြားနားနေမယ် ၊ ကိုယ်မသိတဲ့ alphabet တွေကလည်း သင့်ကို ပိုလို့ အခက်တွေ့စေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဥပမာ English speakers တွေအတွက် Russian ဘာသာစကားကို သင်ယူမယ်ဆိုရင် Cyrillic alphabet ကို သင်ယူရမှာ ဖြစ်သလို ၊ Hindi ဘာသာစကားကို သင်ယူချင်သူများဟာလည်း grammar နဲ့ vocabulary အပြင် Devanagari လို အရေး အဖတ်ကို လည်း သင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Latin alphabet ကို အသုံးပြုတဲ့ languages တွေ ဟာ English ဘာသာစကား နဲ့ ပတ်သက်မှု ရှိနေပါတယ် ။ English ဟာ German , Dutch ကဲ့သို့သော ဘာသာစကားများနဲ့ ဆွေမျိုးတော်ဆက်ပါတယ် ။ German syntax ဆိုတာ sentence structure ၀ါကျတည်ဆောက်ပုံက verbs ကို sentence ရဲ့ အဆုံးမှာထားပါတယ် ။ German phonemes လို့ခေါ်တဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့ အသံထွက်ကို လေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်း စကားပြောအသံ နဲ့ ရေးတဲ့အသံ တို့ဟာ အသံထွက် အတိအကျ တူညီမှုရှိနေပါတယ် ။ အထူးသတ်မှတ်ထားတဲ့ pronunciation rules တွေ မရှိပါဘူး ။ ပြီးတော့ vocabulary တွေကို လေ့လာရတာ လွယ်ကူမှု ရှိပါတယ် ။ English vocabulary တော်တော်များများ ဟာလည်း German ဘာသာစကားက ယူသုံးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် စကားလုံးတွေဟာ အချင်းချင်း ဆက်ဆက်မှုရှိနေပါတယ် ။ haus = house , wilkommen = welcome ဒီလိုစကားလုံးလေးတွေက မှတ်မိရလွယ်ပါတယ် ။
French နဲ့ Italian ဘာသာစကားက Spanish နဲ့တူပါတယ် ။ French pronunciation နဲ့ spelling တွေဟာ irregular verbs တွေနဲ့ အသံထွက်တွေ များစွာပါရှိသောကြောင့် difficult to master ပါပဲ ။ French မှာ အသံထွက်တစ်ခုကိုပင် spell လုပ်ပုံက multiple ways ရှိပါတယ်တဲ့ ။ Italian အီတလီသားတွေကျတော့လည်း လူတစ်ယောက် အသံတစ်မျိုးစီ တွက်နေကြတော့ လေ့လာသူဟာ စကားလုံးရဲ့ correct sound ကို မသိရဘဲ အဓိပာယ်ပါ ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ် ။
သတင်းကောင်းတစ်ခုက Spanish, Italian , French ဆိုတဲ့ Romance languages တွေမှာ similar vocabulary တူညီမှုတော့ရှိပါတယ် ။ вЂњcowвЂќ ကို vaca, vacca, and vache လို့ပြောကြပါတယ် ။